Xukuumadda Somalia oo shaacisay in Dhismaha Dalka uu yahay mid horyaala Beesha caalamka – idalenews.com
Xukuumadda Somalia oo shaacisay in Dhismaha Dalka uu yahay mid horyaala Beesha caalamka
Xukuumadda Somalia, ayaa waxa ay sheegtay in Arrimaha la xiriira Dhismaha Dalka iyo Xarumaha Dowladda ay la kaashaneyso Dowladaha daneeya Arrimaha Somalia.
Afhayeenka Madaxtooyada Somalia Eng. C/raxmaan Yariisoow, ayaa waxa uu sheegay in inta ay ku sugnaayeen Britain ay Madaxda Dowladda la kulmeen Beesha Caalamka, isagoona sheegay in Dowladda ay Dowladaha dhigeeda ah kala hadashay qaabka looga gacansiin lahaa Dadaalada ay Dowladu ku dooneyso dhismaha Dalka.
Afhayeenka ayaa waxa uu sheegay in Madaxweyne Xassan inta uu ku sugnaa Britain la kulmay Mas’uuliyiin kasoo qebgaleysayb Shirkii G8 isagoona Madaxweyne Xassan horudhaca shirkaasi Madaxda Beesha Caalamka kala hadlay sidii garab looga siin lahaa wax ka qabadka dalka Somalia, Wuxuuna Afhayeenka sheegay in caalamka,Soomaaliyana ay ubalan qaadeen garab istaagida dhinac waliba.
Hadal uu Madaxweynaha Soomaaliya ka jeediyay shirka hordhaca ahaa ee G8-ka ayaa wuxuu halkaasi ka cadeeyay in Madaxweynaha Soomaaliya uu doonayo horumarka dalka Soomaaliya,hadii uusan caalamka garab qabana Soomaaliya aysan soconeyn.
Dhanka kale, Afhayeenka Madaxtooyada Soomaaliya Eng. Yariisow ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka faa’iideestaan kaalmooyinka beesha caalamka Dowladda Soomaaliya ay ka helayso,maadaama dadka Soomaalida la doonayo inay gacmahooda wax ku qabsadaan.
Ugu dambeyntii, Eng. Yariisow, ayaa waxa uu rajo ka muujiyay qaabka ay Dowladda Somalia wax ula qeybsaneyso Dowladaha Caalamka, isagoona ku taliyay in Dadyowga Soomaaliyeed looga baahan yahay ka tashiga Aayahooda.
Maxkamadda Gobalka Mudug oo Xakun dil Toogasho ah riday
Digniin kama dambeys ah oo loo diray Dadka ku nool guryaha Dowladda